Ahoana no manapaka sy manaikitra ny fametahana kompania
Raha ny sary etsy ambony aseho, mety ho toy izany ny faritra misy anao, tsy ara-dalàna izany ary irinao ny hamolavola azy amin'ny fomba miavaka. Saingy nilaza taminao foana ny ozinina WPC decking fa hamokatra vokatra iray na roa na habe ary halavany fotsiny izy ireo. ireo, mety hieritreritra ianao ...
Soso-kevitra vitsivitsy momba ny WPC
avy amin'ny admin tamin'ny 21-07-06
Ny vokatra vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo (WPC) dia mankafy ny tombony azo avy amin'ny hazo sy ny polymer material, saingy afaka amin'ny lesoka izy ireo. Ny fitaovana WPC dia matanjaka be, manakana ny lo, ny fanoherana ny toetr'andro, ny fanoherana ny slip. Azo ampiasaina amin'ny tontolo, zaridaina, villa ary sehatra hafa ivelan'ny trano.
Ny fametahana WPC dia fohy ho an'ny plastika hazo sy ny fametahana paompy, malaza kokoa eran'izao tontolo izao izy io. Rehefa milazalaza ny fametahana volo dia lazainay foana fa ny hosotra WPC dia tsy misy hosodoko, tsy misy lakaoly, ambany fikojakojana. Avy eo mety hisy hampisafotofoto izany azo hosodoko ve ny takelaka fanaovana takelaka WPC? Raha azo atao, ahoana ny ...
Manadio sy mitazona ny fametahana WPC
Ny fametahana WPC dia manana tombony betsaka noho ny gorodona hazo nentim-paharazana ary nanjary nalaza kokoa ankehitriny. Nefa tsy misy decking WPC mitambatra izay tsy misy fikojakojana 100%. Rehefa ampiasaina dia mbola mila fikojakojana ara-dalàna be dia be mba hanitarana ny androm-piainana, fa ny fikojakojana Tsotra ihany koa ny tasy amin'ny ...
Ny torolàlana momba ny fametrahana ny rindrina WPC Wall Cladding
Ny WPC dia tsy misy plastika vita amin'ny hazo ary mitambatra, fanoherana ny toetr'andro, tsy tantera-drano, fisorohana bibikely ary fikojakojana ambany. Ka angamba mety hafangaro amin'ny mpanjifa sasany ny fametrahana azy, amin'ny inst ...
Ahoana no hametrahana WPC Decking?
Ny WPC Decking dia mankafy ny tombony azo amin'ny hazo sy amin'ny polymer material, fa afaka amin'ny lesoka. Noho izany dia malaza erak'izao tontolo izao ny decking fitambaran-trano. Mety hanahy ny amin'ny fametrahana ianao, aza manahy momba azy. mora apetraka ...
Ny WPC dia tsy misy fitambarana plastika hazo, ny tena fotony dia ny PE sy ny kofehin-kazo. Ny WPC dia misitraka ny tombony amin'ny fitaovana hazo sy polymer. Fa afaka amin'ny lesoka izy ireo. Mpisolo tena tsara ho an'ny hazo izany. ny hatsaran-tarehiny tsara tarehy sy mahatalanjona ...
Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana WPC ivelany, Fitaovana WPC, Fanesorana ivelany WPC, fametahana plastika vita amin'ny hazo, Rihana fametahana WPC,